10 Qof oo Ku dhintay Roobab Daadad Wata Oo Ka Da'ay Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya.
Tuesday April 24, 2018 - 07:57:49 in Wararka by Super Admin
Roobabka Xilliga Guga ayaa sanadkan si aan horay loo arag uga da'ay inta badan gobollada dalka Soomaaliya waxaana roobabkaas ka dhashay khasaara nafeed.
Wararka ka imaanaya gobollo dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in tobaneeyo qof ay u dhinteen daadad iyo Biriq ku dhacday.
Gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya waxaa lagasoo sheegayaa Roobab mahiigaan ah oo saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada, Roobabka oo ah kuwa saacado badan da'ayay ayaa sababay dhimashada inkabadan 10 qof.
Wariye ku sugan Gedo ayaa soo sheegay in dad gaaraya 10 qof ay ku dhinteen degmooyin ay ka mid yihiin Ceelwaaq iyo Ceelcadde.
Magaalooyinka qaar biyaha Xareedda ayaa maasheeyay waxaana jira barakac xooggan oo ay sameynayaan kumanaan qoys, magaalada Ceelwaaq Daadad ayaa ku dhuftay kadib markii roobab maalmo da'ayay ay saameeyeen.
inta badan guryaha magaalada waxaa buux dhaafiyay biya xareedda taas oo keentay iyo qoysas farabadan ay ufirxadaan dhulka Miyiga ah, sidoo kale magaalada Ceel-cadde inteeda badan waxaa maasheeyay biyaha xareedda, ugu yaraan 3 qof ayaa la sheegay in ay gudaha magaalada ku dhinteen halka 2 qof ay ku dhinteen deegaanka Tuulo Barwaaqo.
Deegaanno hoos yimaad magaalooyinka Ceelwaaq iyo Beled Xaawo deegaanno hoos yimaad waxaa lagasoo calaamadeeyay dhimasho, dhibaatada ugu daran waxaa geysanaya Daadadka roobku wato kuwaas oo kusoo fatahay magaalooyinka iyo tuulooyinka.
Dhinaca kale wararka ka imaanaya gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen deegaan 30 KM ujira magaalada Caabud Waaq kadib markii ay biriq ku dhacday qoys deganaa tuulada Ari Caddeey.
Gobollada Hiiraan,shabeellaha dhexe iyo shabeellaha Hoose ayaa iyana lagasoo sheegayaa Roobab daadad wata iyo Fatahaad uu wabiga shabelle ku sameynayo sedaxdaas gobol ee uu maro.
Xildhibaanno Katirsanaa Dowladda Federaalka iyo Koonfur Galbeed Oo Muqdisho ku dhintay.